Telo volana fahatelo : ifanotofana ny fanaovana « cours » | NewsMada
Telo volana fahatelo : ifanotofana ny fanaovana « cours »
Ezaka faramparany ho an’ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ny telo volana fahatelo. Ho fanampiana ny fahaizana rantovina any an-tsekoly, betsaka ireo mitady olona hampanao “cours” manokana, indrindra amin’izay taranja manahirana.
Betsaka ihany koa ireo tolotra ataon’ireo sekoly sasany ho an’ireo mpianatra mila tosika manokana hiatrehana fanadinana.
Zary lasa “bizina” indray aza izany fampanaovana “cours” manokana izany amin’izao fotoana izao. Mandeha isaky ny ora ny vola aloa ka tsy latsaky ny 5.000 Ar isan’ora izany.
Anisan’ny taranja manavia ny tanora ny siantifika toy ny matematika sy ny fizika. Matetika, ireo no ilan’ny mpianatra fanampiana sy tohana manokana avy amin’ny mpampianatra mampanao “cours”.
Isaky ny asabotsy sy alarobia hariva ny fampianarana. Misy koa ireo mianatra amin’ny alina aorian’ny amin’ny 5 ora hariva mba tsy hanelingelina ny fampianarana any an-tsekoly. Misy koa anefa ny sekoly tsy manaiky ny fampanaovana “cours” ny mpianany mihitsy satria tokony ho efa ampy ny mpianatra ny fanomezam-pahalalana rehetra rantovina any am-pianarana.
Manasazy na mandroaka ny mpianany mihitsy ny sekoly sasany raha vao fantany fa manaraka cours manokana ny mpianany. Tanjony amin’izany ny hampitoviana lenta ny fahaizan’ny mpianatra iray kilasy ka tsy misy ny tombo sy hala.